61.5% ee Gawaaridaada ma ahan Bani'aadam | Martech Zone
Bishii Maarso ee la soo dhaafay, Incapsula waxay daabacday daraasad muujisay inta badan taraafikada degellada (51%) waxaa soo saaray hay'ado aan dad ahayn, 60% kuwaas oo si cad u xumaa. Warar xun traffic bot taraafikada ayaa kor u kacsan oo aad u weyn. Dhab ahaan, ilaa 61.5% ee taraafikada aad ku aragto Google Analytics Google kama uusan abuurin bini aadam, laakiin bot.
Tani waxay ahayd helitaan weyn oo ay wada-hawlgalayaashayada ka heleen Istaraatiijiyadda Goobta, yaa maamula Edge-ka Webka Raadiyaha tus in aan kafaala qaadayno. Waxay macnaheedu tahay xoogaa shirkadaha, kuwaas oo laga yaabo inay isweydiiyaan sababta sicirka beddelka ay ugu sii socdaan inay hoos ugu dhacaan boggooda. A bot ma beddeleyso… laakiin way kala leexan doonaan tirooyinka waxqabadka beddelka guud!
Tags: taraafikada botjabsigakuwa iska dhigayaxoqidspammers
22, 2013 at 12: 56 PM
Haddii aan kaliya ka shaqeyn karo waddo aan ku suuq geeyo 'Gaadiidka dadka aan ahayn', oo aanan ka hadleyn sodohday halkan, waxaan sameyn karaa nasiib ..
22, 2013 at 10: 12 PM
Hadday tahay gurguurto xada waxyaabahaaga - laga yaabee inuu leeyahay xiriiriyeyaal xiriir la leh 🙂
Ma ognahay haddii tijaabadani ay ahayd mid gaar u ah warshadaha? Miyaad dareemaysaa inay ka sii xumaan karto / kaga fiicnaan karto warshadaha qaarkood kuwa kale?